विश्वकप क्रिकेट : न्यूजिल्याण्ड र बंगलादेश भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? – Idea Khabar
विश्वकप क्रिकेट : न्यूजिल्याण्ड र बंगलादेश भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
आइडिया खबर२०७६ जेष्ठ २२, बुधबार १२:३४
एजेन्सी । आईसीसी एकदिवशीय विश्वकप क्रिकेट अन्र्तगतको आजको खेलमा न्यूजिल्याण्डले बंगलादेशको सामना गर्दैछ । क्राइस्टचर्चमा भएको आतंकबादी हमलापछि न्यूजिल्याण्ड र बंगलादेश पहिलोपल्ट आमने सामने हुने खेल नेपाली समयअनुसार साँझ सवा ६ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
न्यूजिल्याण्ड र बंगलादेशको एउटा संयोग के हो भने दुवै टोली अहिलेसम्म विश्वकप जित्न प्रयासरत भएको समयमा दुवै टोली जितका लागी संघर्षरत हुनेछन् । विश्वकपमा विजयी सुरुवात गरेका दुवै टोलीका लागि लगातारको जित नै मुख्य लक्ष्य हुनेछ । कोलिन मुनरो र मार्टिन गुप्टिल दुवैले अर्धशतकीय पारी खेलेपछि श्रीलंकाबिरुद्धको पहिलो खेल न्युजिल्याण्डले १० विकेटले जितेको थियो । आजको खेल निकै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ । ,
स्वारेज चम्किँदा कोपा अमेरिका फुटबलमा शानदार जित दर्ता गर्यो उरुग्वेले
२०७६ असार २, सोमबार ०८:२६
एएफसी यू १६ छनोटको अन्तिम खेलमा नेपालद्वारा श्रीलंका पराजित,
२०७६ आश्विन ६, सोमबार ०२:२२
२०७५ श्रावण १४, सोमबार ०६:४७
आईसीसी सुपर ओभरको नियम फेर्न बाध्य , यस्तो छ कारण
२०७६ आश्विन २७, सोमबार २२:०९